Maxaad Kala Socotaa Qisadii Jacayl Ee Ku Dhacday Fannaanadda Caanka Ah Ee Binti Cumar Gacal?- Q3aad | FooreNews
Home Aragtida Dadweynaha Maxaad Kala Socotaa Qisadii Jacayl Ee Ku Dhacday Fannaanadda Caanka Ah Ee Binti Cumar Gacal?- Q3aad
Maxaad Kala Socotaa Qisadii Jacayl Ee Ku Dhacday Fannaanadda Caanka Ah Ee Binti Cumar Gacal?- Q3aad
FoorenewsNov 12, 2017Aragtida Dadweynaha, wararka0
Kadib waxaan damcay in aan usii gudbo qolka uu ku jiray ninkii aan la ballansanaa. Waxa markaasi albaabka ku gargaraacaysa gabadh yar oo eeddadii dhashay. Isaga oo qaylinaya ayuu soo booday naa maad naga daysid ayuu intaasi leeyahay oo waxa uu dhibsanayaa gabadha yar ee albaabka ku soo garaacaysa. Mise albaabkii buu fakh ka soo siiyey oo furay. Mise insha ayuu igu dhuftay. Mar alla markii uu wajigayga arkay ayuu farta isaga oo qaniinaya hoos u foorarsaday oo yidhi: “Ma Adigiibaa?”..
Fannaanadda Binti Cumar Gacal oo qisadaasi jacayl ee ku habsatay iyo sida xaalku ahaa iyo wixii kala qabsaday ninkii ay jeclayd ee ballantu ka dhaxaysay habeenkaasi innooga sii warramaysaa waxa ay tidhi: “farta ayuu qaniinay oo waxa uu yidhi Allah!!” Isaga oo naxsan oo aan I filayn markaasi. Albaabka ayuu isku dayay in uu gacantiisa u dhigo oo iga qariyo waxa gudaha ugu jira qolkiisa. Shakigii ayaa igu sii batay aadna waan u argagaxsanaa. Aniga oo xanaaqsan ayaan ku idhi maxaad noo celinaysaa naga leexo. Kadib aniga oo hore u sii degdegaya ayaan albaabkii gudaha isugu tuuray oo gudaha u galay qolkii. Aadbuu u naxay oo wajigiisa ayaad ka dareemaysay sida uu u naxay. Waxa aan ahaa wakhtigaasi gabadh aad u dhuuban. Sidaa darteed markii uu gacantiisa albaabka igaga gudbayay inta ay sidaa isaga qabtay ayaan gabigiisiiba ka hoos dusay oo aan gudaha u galay qolkii uu ku sugnaa. Isaga oo I daba socda ayuu yidhi naa qolka ka soo bax!!. Waxa uu sheegayaa illayn gabadh uu meesha ku haysta oo kula jirtay qolka. “Naa qolka ka soo bax!!” ayuu yidhi. Haq!! Naxdin waynaa!!. Illayn gabadh baa qolka la joogtay oo la haasaawaysay. Waxa aan ku idhi naa hasoo bixin ee joog. Wallee in aanad soo baxayn. Gabadhii waxaan ku idhi: “Walaal daqiiqado ka hor Abbaayo macaan buu ku lahaa. Imikana waxa uu ku leeyahay naa naga soo bax. Wallee in aanad baxayn ee joog halkaaga, ma soconayso middaasi in uu marna abbaayo macaan ku yidhaa imikana ku yidhaa naa naga soo bax, taasi ma soconayso. Gabadh Soomaaliyeed ayaad tahay anna gabadh Soomaaliyeed ayaan ahay . Ragga Soomaaliyeed sidani waa caadadood. Abbaayo meeshaada joog ” intaasi ayaan ku idhi gabadhii aniga oo cadho madaxu I qarxi gaadhayo oo aad u kacsan”.
Maxaa dhacay wixii intaasi ka dambeeyey?. Side xaalku noqday, maadaama xaajo dhabaqday oo xaaladdu faraha ka baxday ninkiina uu fashilmay. Fannaanad Binti Cumar Gacal oo arrinkaasi layaab leh innooga sii qisoonaysaa waxa ay tidhi:
“Markii aan gabadhii wajiga ka buuxsaday ee aan muuqaalkeeda arkay ee aan la hadlay ee aan ku idhi walaal halkaaga iska joog bixi mayside ayaan soo jeedsaday oo aan albaabkii aan ka galay qolka dib u soo milicsaday oo aan damcay in aan anuu dibadda u baxo oo aan iska noqdo. Ninkii oo albaabka ag taagan ayaa isku kay gudbay oo albaabkii iga hor joogsaday. Waxaan ku idhi waar iga hor leexo aan baxee. Waxa uu yidhi bixi maydis ee joog ma baxayside. Waxaan ku idhi waar Walloon baxayee albaabka maad iiga hor leexan mise wax kalaad isku arki doontaa. Anoo cadho jiq ah oo aan is ogayn wax aan ku hadlayo iyo meel aan marayo toona. Markii uu igu yidhi makaa leexanayo ayaan aniga oo aan is ogayn bir miis dul saarnayd oo qolka taallay la soo boodday oo isku soo maqiiqay aniga oo madaxu cadho I qarxayo. Miyirkaygu caadi ma aha oo haddii aanu iga leexan oo albaabka ii bannayn waxa ay u badan tahay in aan birtaa ku dhufto oo aan madaxa bashaaqiyo. Runtii si aan ahaa isma kala ogayn oo waxa aad dareemi kartaa waxa igu dhacay..” ….La Soco
Previous PostWarbaahinta Ingiriiska Oo Baahisay In Somaliland Noqotay Goobtii Ugu Horeysay Afrika Ee Doorasho Loo Isticmaalayo Tiknolajiyadii Ugu Casrisanayd Next PostMaxaad Kala Socotaa Madaxweyne Caan Ah Iyo Qoyskiisa Oo Toban Bilood Xabsi Guri Ugu Jira Dowlad Kale